Dowladda oo sheegtay inay diyaar u tahay in ciidan u dirto Koonfurta Sudan | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Dowladda oo sheegtay inay diyaar u tahay in ciidan u dirto Koonfurta...
Dowladda oo sheegtay inay diyaar u tahay in ciidan u dirto Koonfurta Sudan
Wasiir ku xigeenka waxbarashada Soomaaliya Cabdiraxmaan Jaabiri oo ka hadlayey Muqdisho ayaa waxa uu sheegay in dalkiisa uusan ka laba labayneyn inuu cidamo u diro Koonfurta Sudan.
“Waxaa laga yaabaa in dadka qaar ay is-weydiiyaan sidee ayey suurt-gal ku tahay in dal Soomaaliya oo kale ah, oo ka soo kabanaya dagaallo uu ciidamo nabad-ilaali ah diro, laakiin maxaa naga hor-istaagaya inaan ciidamo ku tabarucn,. Burundi ayada oo dagaallo ku jirto ayay annaga ciidamo noo soo dirtay, oo ay gacan ka gaysatay dib u dhiska dalkeena, maxaa anaga noo diidaya inaan ka qeyb-galno dhisidda nabadda dal kale oo Afrikan ah”. Ayuu yiri
IGAD ayaa dooneysa in ciidamada ka imaanaya Soomaaliya, Sudan, Uganda iyo Jabuuti lagu daro ciidamo kale oo nabad ilaalin ah oo horey u joogay Koonfur Sudan.
Hawlgalka QM ee Koonfur Sudan ayaa waxa uu ka kooban yahay 17,000 oo askari, kuwaasi oo badbaadinaya dadka shacabka ah, islamarkaana gacan ka gaysanaya sidii gargaar lagu gaarsiin lahaa, halka ay sidoo kalena la soconayaan xadgudubyada xuquuqda aadanaha.
Ciidamada AMISOM iyo kuwa dowladda Soomaaaliya oo is-garabsanaya ayaa la dagaalamaaya Al-Shabaab oo halis ku ah inay riddo dowladda federaalka ee caalamka uu aqoonsan yahay.